Ciyaaraha iyo nashaadaadka jimicsiga ayaa kaa dhigaya kuwo kugu habboon oo diyaar kuu ah, si aad u joogteysid xajmiga, waxaad u baahan tahay diyaarinta fasalka koowaad! Haddii ay tahay socod barasho, tababar maxkamadeed, tabarbar dulqaadasho ama haddii kale, helitaanka waxyaabaha ku habboon fadhigaaga ayaa runtii gacan ka geysan kara saameyn weyn!
Nasiib wanaag, at WoopShop, waxaa lagugu soo dhaweynayaa inaad dhex marto qaybaha kala duwan ee isboortiga, adigoo soo bandhigaya dharka ugu wanaagsan ee jimicsiga, aaladaha iyo aaladaha si safarkaagu u fududaan oo waxtar badan!
Waxa aan halkaan ku bixinno waa fursad aan ku diyaarin karno xilli ciyaareedka soo socda, oo sidaas ku sameyso qaab ahaan! Qiimo dhimis fara badan ayaa sidoo kale lagu laalaadaa hawada sidoo kale, Woophop wuxuu kuu ballanqaadayaa inaad khibrad macmiil faa'iido leh leedahay iyo iskaashi badan! Laakiin, waa maxay waxa aad runtii ubaahantahay?
Dadaalkaaga si aan kaaga caawino inaad qaab ahaan kusii jirtid, halkan waxaa ku yaal xargaha 4 ee aad ubaahantahay inaad si sax ah ku bilowdo!
Ilaaliyayaasha Jilibka-Gacanta Neefta Leh ee Neefsanaysa.
Iyaga oo qaadanaya doorka Isboortiga Isboortiga, garsoorayaashan jilibka ah ayaa sameeya garsoorkaaga aasaasiga ah marka aad shaqeyneyso. Kaliya maahan inay ku raaxaystaan ​​oo ay biyuhu biyuhu qaadan karaan, waxay sidoo kale bixiyaan taageerada magnetic-ga waxayna u badan yihiin qaabab badan ilaalin dheeraad ah. Waxaa lagu heli karaa midabyo kala duwan isla markaana u fiican jilibka iyo xusullada, carruurtan yari waxay kuu ballanqaadaan inay kaa ilaaliyaan dhaawacyada suurta galka ah iyo murqaha, kala-goysyada iyo muruqyada lugta! Iyaga qiimo jaban ku hel HALKAN!
Biyo-la-aan-biyo-xireen Wireless-ka Bluetooth-ka ah oo laga dhisay Mic TE Sports Headphone
Ma waxaad dooneysaa inaad aagga ka baxdo inta aad shaqeyneyso? Wax dhib ah halkan kuma jiraan ugu dambeeyay makarafoonka! Biyo-xireen, oo sahal u ah dhegaha oo bixiya codka tayo sare leh, telefishannada Bluetooth-kaani waxay leeyihiin makarafoono aad u tayo sareeya, oo ku siinaya dhawaaqyo cusub iyo waqti naftaada! Ficil ahaan in la wareego oo lagala hadlo taleefanka inta kor loo qaadanayo, sidoo kale, aaladahan dhegaha laliska ayaa loo sameeyay inay noqdaan kuwo waari kara oo si wanaagsan kuugu adeega! Soo hel HALKAN!
Asalka Miband2 Wadnaha Korjoogteynta.
Weligaa ha ka walwalayn cadaadis dhiig oo sareeya ama heerka garaaca wadnahaaga mar labaad oo ku raaxeyso jimicsigaaga kormeeraha heerka wadnaha ee gaarka ah! Quruxda ku saabsan qalabkan waxqabadka waa mid aad u fudud in la xidho oo qabata in ka badan hal shaqo. Xaqiiqdii, marka laga reebo qiimeynta garaaca wadnahaaga, jijimadu sidoo kale waxay u adeegtaa sidii saacad saacad ah, mitir-cabir, farriin iyo xusuusinta wicitaanka, Raadiyaha Hurdada, iyo Jiheeyaha jimicsiga! Biyo-qabatin oo laga heli karo midabyo kala duwan, waxaad ka heli kartaa Miniband2 kormeeraha garaaca wadnaha qiime-dhimista HALKAN!
Tababaridda Wargelinta Iskudhufikalka Heerka Xirfadaha Kubadda
Haddii aad danaynaysid inaad dhisto guud ahaan awooda jidhka, xawaaraha feerka ee aadka loo jecelyahay ayaa kaa farxin doona! Set wuxuu ka kooban yahay madaxa '1 headband', lambarada 1 ee galoofiska, kubbadda 1 ee ku dhegan xarigga xargaha, 1 boorso suufka gudaha ah, iyo 1 xarig kale. Iyada oo in ka badan ku filan inay ku siiso qeexitaanka muruqyada la doonayo, set ayaa sidoo kale ah mid fudud, si fudud loo qaadi karo oo ku imanaya midabo badan oo la heli karo! Ka raadi qiimaha oo dhan sicir-dhimis HALKAN!
Jacaylka isboorti marna ma joogsanayo, sidoo kale fursadaha adiga kugu sugayaana ma aha WoopShop.com ama Dukaankeena internetka app! Hel heshiisyada xirmo ee ugu fiican oo ku raaxee adeegga macaamiisha ugu fiican khadka tooska ah kuna soo biir kunka macaamiisha faraxsan ee had iyo jeer dhiga tayada iyo talooyinka koowaad! Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan dharkayaga isboortiga iyo baahiyaha isboorti ee dheeraad ah, fadlan booqo qaybta dharka isboorti ama la xiriir kooxdayada maanta!
nem556344krya on March 06, 2021
num556344flebno on March 06, 2021